Anisan’ny efa nahitana izany sahady ny eny Ankorondrano mihazo an’i Masay, raha araka ny fanazavan’ny polisim-pirenena tamin’ny faran’ny herinandro teo. Marihina anefa dia vao enina andro monja izay no nametrahan’ny fitondram-panjakana ireny haingon-tanàna sy jiro mahafinaritra ireny noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Manoloana izany dia tsy hipetra-potsiny ny polisim-pirenena fa handray fepetra mifandraika amin’izany. Hohamafisina hatrany ihany koa ny fitandroana ny fandriampahalemana mandritra ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona rahampitso sy afaka rahampitso alarobia taona vaovao mba hahafahan’ny rehetra mifety amim-pilaminana. Miisa 1.464 moa raha tsiahivina ireo polisy nohetsehina mandritra izao fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao manerana ny Nosy. Namoaka laharana 034 05 518 18 ahafahana mifampita vaovao mikasika izany halatra jiro izany ny mpitandro filaminana.